OPPO Band Series | OPPO မြန်မာ
ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အချို့သော အရောင်များသည် ဈေးကွက်အချို့တွင် ဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။
1.1" AMOLED မျက်နှာပြင်
သွေးတွင်း SpO2 ပမာဏအား အဆက်မပြတ် တိုင်းတာစောင့်ကြည့်ပေးခြင်း
နှလုံးခုန်နှုန်းအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်လေ့လာပေးခြင်း
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်သည့် ပုံစံ ၁၂ မျိုး
၅၀ မီတာအထိ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း
အသိပေးချက်များအား ထပ်တူကျအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
1.1" ရောင်စုံ AMOLED မျက်နှာပြင် :
ကြီးမားခြင်း၊ တောက်ပခြင်းနှင့် လှပခြင်း
စူးရှတောက်ပသောအရောင်၊ ကောင်းမွန်သော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် မျက်ဝန်းများအား သက်သောင့်သက်သာရှိစေသော AMOLED မျက်နှာပြင် ပါဝင်သည့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာရှိခြင်း။ OPPO Band ဝတ်ဆင်ထားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မျက်နှာပြင်အခုံးအား အပြည့်အဝကာကွယ်မှုပေးနိုင်စေရန် ခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်သော 2.5D မှန်သားကို တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။
အများဆုံး ပြသနိုင်သည့် စာလုံးအရေအတွက်
သွေးတွင်း SpO2 ပမာဏအား အဆက်မပြတ် တိုင်းတာစောင့်ကြည့်ပေးခြင်း :
အိပ်နေစဉ်အတွင်း အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ခြင်း
SpO2 Sensor သည် သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ SpO2¹ သည် အိပ်စက်မှုကြာမြင့်ချိန်နှင့် အိပ်စက်မှုအခြေအနေမှတ်တမ်းများကိုပါ စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ပြီးသည့်နောက် လန်းဆန်းစွာနိုးထပြီး တနေ့တာအတွက် အသင့်ရှိနေစေမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ နှလုံးခုန်သံကို စောင့်ကြည့်ပေးခြင်း :
အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို တွေ့ရှိပါက ၂၄ နာရီပတ်လုံး နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်သည့်စနစ်မှ တုန်ခါသော အချက်ပြစနစ်ပေးပို့ကာ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်စက်အနားယူချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ် အသက်ကယ်ဆယ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ နှလုံးခုန်သံများကို အမြဲမှတ်သားထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၁၂ မျိုး :
OPPO Band ၏ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံ ၁၂ မျိုး²တွင် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပါဝင်အောင် ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အရှိန်ကို အာရုံခံပေးနိုင်သော Sensor မှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် အချိန်ကာလ၊ အကွာအဝေးနှင့် အခြားတိုင်းတာချက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုင်းတာပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အားကစားလုပ်ဆောင်ချက်များအား ပိုမိုစိတ်ဝင်တစား လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံမက ထိရောက်မှုရှိအောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆီပိုများ ဖယ်ရှားပြီး ကျန်းမာသွယ်လျစေမည့်
အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော အဆီလောင်ကျွမ်းအောင် ပြေးခြင်းသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်ထက်ပိုမိုပြီး လျှော့ချနိုင်အောင် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နှလုံးခုန်နှုန်းကိုပါ ထိန်းပေးထားနိုင်သလို အပြေးလေ့ကျင့်စဉ်ကာလအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် လိုအပ်မည့်ပမာဏကိုလည်း အသိပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသည့်အချိန်မှာပင် ပိုမိုကျစ်လစ်သော ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အသုံးဝင်သည့် ကိရိယာများပါဝင်သောကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် လွတ်လပ်အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်သည်။³
လွဲချော်မှုများ ဘယ်သောအခါမှ ထပ်မံမဖြစ်စေခြင်း
မက်ဆေ့နှင့် ဖုန်းအဝင်များအား သတိပေးသည့်စနစ်က အမြဲအဆက်အသွယ်မပြတ် သတင်းပေးပို့နေမည်ဖြစ်သည်။
နေ့သစ်များကို မှန်ကန်စွာ အစပြုခြင်း
မနက်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး နိုးထနိုင်ရန် ညင်သာစွာ တုန်ခါလှုပ်နိုးပေးနိုင်သော နိုးစက်စနစ် ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ *HeyTap ကျန်းမာရေး app တွင် နိုးစက်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
*HeyTap ကျန်းမာရေး app တွင် နိုးစက်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
နေပူပူ မိုးရွာရွာ အမြဲအသင့်ဖြစ်ခြင်း
ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကို သတင်းပေးပို့ခြင်းဖြင့် နေကာမျက်မှန်တပ်ရမလား၊ ထီးဆောင်ရမလား ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ *ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကို သတင်းပေးပို့ခြင်း များရယူနိုင်ရန် HeyTap ကျန်းမာရေး app နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
*ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကို သတင်းပေးပို့ခြင်း များရယူနိုင်ရန် HeyTap ကျန်းမာရေး app နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
လက်ကောက်ဝတ်မှတဆင့် သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်းကို လိုသလိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
သီချင်း ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ သီချင်းရွေးခြင်းနှင့် အသံအတိုးအလျှော့လုပ်ခြင်းများကို ဖုန်းလှမ်းယူစရာမလိုဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဖုန်းအား အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
ဖုန်းနေရာအထားမှားသည့်အခါ ဖုန်းအသံကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖွင့်နိုင်သောကြောင့် ဖုန်းတည်နေရာကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။⁴
ဖုန်းကင်မရာအား Band မှတဆင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
ဖုန်းကင်မရာကို အဝေးထိန်းစနစ်သုံးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးချင်ပါသလား။ OPPO Band မှ ကလစ်တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နာရီမျက်နှာပြင်မှ ခြေလှမ်းအရေအတွက်၊ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှု၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်သည့် အချိန်နှင့် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အရောင်စုံ X ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ပြသပေးသောကြောင့် လှုပ်ရှားမှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်သည့် ခြေလှမ်း 8000၊ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု 300၊ နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မိနစ် 30 နှင့် လုပ်ဆောင်ချက် ၁၂ မျိုးကြာချိန် စသည်တို့ကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများအဖြစ် ပုံသေသတ်မှတ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်သည့် ခြေလှမ်း 8000၊ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု 300၊ နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မိနစ် 30 နှင့် လုပ်ဆောင်ချက် ၁၂ မျိုးကြာချိန် စသည်တို့ကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများအဖြစ် ပုံသေသတ်မှတ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
ရွေးချယ်စရာ မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းများစွာထဲမှ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မည့် ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ကာ ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
*OPPO Band တွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော မျက်နှာပြင် ၅ ခု ပါဝင်ပါသည်။ အခြားမျက်နှာပြင်များကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် HeyTap ကျန်းမာရေး app တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြထားသော နာရီမျက်နှာပြင်သည် ပြသရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
*နာရီမျက်နှာပြင်များကို system OTA မှ အဆက်မပြတ် ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၅၀ မီတာအထိ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊
ရေကူးရာတွင် စိတ်ချရသော ကာကွယ်မှု
၅၀ မီတာအထိ⁵ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရေကူးခြင်းစနစ်တို့ပါဝင်သောကြောင့် OPPO Band ကို ရေချိုးနေစဉ်အချိန်သာမက ရေကူးကန်နှင့် ကမ်းခြေများတွင်ပါ ဝတ်ဆင်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေကူးနေစဉ်တွင် OPPO Band သည် လောင်ကျွမ်းသွားသော ကယ်လိုရီကို မှတ်တမ်းတင်ပေးရုံသာမက အကြိမ်အရေအတွက်ကိုပါ တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာသော chip ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အားတကြိမ်သွင်းရုံဖြင့် ၁၂ ရက်ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။⁶
1. သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်အခြေအနေ SpO2 တိုင်းတာခြင်းဆိုသည်မှာ သွေးတွင်ပါဝင်သော ဟေမိုကလိုဗင်၏ အောက်ဆီဂျင်သယ်ဆောင်သည့် ပမာဏနှင့် အောက်ဆီဂျင်မသယ်ဆောင်သော ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ SpO2 အဆက်မပြတ်တိုင်းတာ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အိပ်နေစဉ်အချိန်တွင် ဖွင့်ထားပြီး HeyTap ကျန်းမာရေး app ရှိ Manage > More > Workout and Health သို့ အစဉ်အတိုင်း ဝင်ရောက်၍ "Monitor SpO2 during Sleep" ကို ဖွင့်ပေးထားရမည်။
2. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်း ၁၂ မျိုးတွင် အိမ်ပြင်ပတွင် အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်း၊ အိမ်တွင်း အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်း၊ အဆီလောင်ကျွမ်းအောင် ပြေးခြင်း၊ အိမ်ပြင်ပတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိမ်ပြင်ပတွင် စက်ဘီးစီးခြင်၊ အိမ်တွင်း စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း လှေလှော်ခြင်း၊ ခရစ်ကတ် ရိုက်ခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့် ယောဂကျင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
3. အသုံးပြုရလွယ်ကူစေသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် မက်ဆေ့အသိပေးခြင်း၊ ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှု အသိပေးခြင်း၊ အချိန်မှတ်နာရီ၊ နိုးစက်၊ ရာသီဥတု အသိပေးချက်၊ သီချင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ဖုန်းရှာခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
4. ဖုန်းရှာသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဖုန်းကို OPPO Band နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။
5. OPPO Band ၏ ရေစိုခံသည့်နှုန်းမှာ ISO 22810:2010 စံညွှန်းအရ 5ATM ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ရေကူးကန်နှင့် ရေမနက်သော ရေပေါ်လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အသက်ရှူပိုက်ဖြင့် ဒိုင်ဗင်ထိုုးခြင်း၊ ရေပူနှင့်ရေချိုးခြင်း၊ ရေပူစမ်းစိမ်ခြင်း၊ ချွေးပေါင်းခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေလွှာလှိုင်းစီးခြင်းနှင့် အခြားသော ရေဖိအားများသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် OPPO Band အား ဝတ်ဆင်ရန် မသင့်တော်ပါ။ အချိန်ကာလကို လိုက်၍ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်မှုကျဆင်းနိုင်ပါသည်။
6. ၁၂ ရက်ကြာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်းမှ ရရှိသော စမ်းသပ်ချက်များမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ စနစ်ချိန်ညှိမှု၊ အသုံးပြုသည့်ပုံစံ ၊ အသုံးပြုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘက်ထရီ အသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သော ကြာချိန်သည် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ၁၂ ရက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ နှလုံးခုန်နှုန်းအား စောင့်ကြပ်ပေးသော စနစ်၊ လက်ကောက်ဝတ်ကို မြှောက်သည်နှင့် Band မျက်နှာပြင်အား အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးသော စနစ်၊ အချိန်ကြည့်ခြင်း အကြိမ် 30၊ စာတိုအသိပေးချက် အစောင် 30၊ တနေ့လျှင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အသိပေးခြင်း ၂ ခုနှင့် နိုးစက် အဖွင့်အပိတ် ၂ ခုတို့ကို ချိန်ညှိထားရှိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ၇ ရက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် အိပ်ချိန် ၉ နာရီအတွင်း SpO2 အား အခါအားလျော်စွာ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ နှလုံးခုန်နှုန်းအား စောင့်ကြပ်ခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်မြှောက်သည်နှင့် Band မျက်နှာပြင်အား အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးသော စနစ်၊ စာတိုအသိပေးချက် အစောင် ၁၀၀ နှင့် တနေ့လျှင် အားကစားပြုလုပ်ချိန်နာရီဝက်ကို ထည့်သွင်းချိန်ညှိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ၃ ရက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြာချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် အိပ်ချိန် ၉ နာရီအတွင်း SpO2 အားအဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ နှလုံးခုန်နှုန်းအား စောင့်ကြပ်ပေးခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်မြှောက်သည်နှင့် Band မျက်နှာပြင်အား အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးသော စနစ်၊ စာတိုအသိပေးချက် အစောင် ၁၀၀ နှင့် တနေ့လျှင် အားကစားပြုလုပ်ချိန်နာရီဝက်ကို ထည့်သွင်းချိန်ညှိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
7. Android ဖုန်းများအတွက် : HeyTap ကျန်းမာရေး app ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ သင့် OPPO Band နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ Android ဗားရှင်း 6.0 နှင့်အထက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ HeyTap ကျန်းမာရေး app ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနောက် Band နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက် app ၏ "Manage" တွင် "Device Update" ကိုရွေးချယ်၍ သင့် OPPO Band ၏ စနစ်အား အဆင့်မြှင့်ပါ။
8. OPPO Band သည် ColorOS 7.1 ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ OPPO Band အား ColorOS 7.1 ထက်နိမ့်သောဗားရှင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပါက အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
9. OPPO Band တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်တွင် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်သာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Android စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည် OPPO လက်ပတ်များစွာဖြင့် တစ်ချိန်တည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
10. OPPO Band သည် ဆေးဘက်သုံးထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အချက်အလက်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဆေးကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။
11. OPPO နှင့်အခြားသော Android စမတ်ဖုန်းများအတွက် HeyTap ကျန်းမာရေး app ကို Google Play Store တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
12. ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ အပြောင်းအလဲကြောင့် အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
13. ယခုဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ၏ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်များမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းသည် စမ်းသပ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိုနိုင်ပါသည်။
14. OPPO Band သည် ယခုလက်တလောတွင် iOS စနစ်အား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။